खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गरौं
मुलुक लकडाउनमा छ । केही मानिसले उपभोग्य वस्तु थुपारेका छन् तर धेरै जना अहिले ग्यास र खाद्यान्नको चिन्तामा छन् । खासगरी ग्यासको वितरणमा समस्या देखिएको छ । यस्तोमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन सबैलाई आग्रह गर्छु । खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ । अब अर्थतन्त्रमा निकै परिवर्तन हुँदै छ । नयाँ परिवेशअनुसार हामी नचल्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र निकै समस्यामा पर्नेछ । यस्तोमा आफ्नै देशको ऊर्जा प्रयोग गरे समस्या पनि कम हुन्छ र देशलाई पनि फाइदा हुन्छ ।
महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न लकडाउन घोषणा भएसँगै विद्युत्को माग पनि घटेको छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने कलकारखाना, होटल, व्यापारिक भवन, कार्यालयहरू बन्द भएपछि विद्युत्को माग घटेको हो । विद्युत् लोडमा मुख्य रूपमा कलकारखाना, होटललगायतको योगदान रहेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै विद्युत्को प्रयोग भइरहेकाले अहिले विद्युत्को लोड घटेको हो ।
लकडाउनको कारण घरायसी प्रयोजनका लागि ग्यासको अभावमा भएमा इन्डक्शन चूल्होलगायत विद्युतीय उपकरण ढुक्कसँग चलाउनु नै बुद्धिमानी होला । पानी, हावाहुरी, प्राविधिकलगायत कारण कुनै स्थानमा केहीबेर विद्युत् अवरोध हुन सक्ने भए पनि विद्युत् आपूर्ति धेरै समयसम्म बन्द हुँदैन । विगतमा भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला इन्डक्शन चूल्हो धेरैले किनेका थियौं । अब ती सबै चूल्हो निकालेर ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गरेर खाना पकाऔं ।
सरस्वतीनगर, कपन, काठमाडौं ।
नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ?[२०७६ चैत, २०]
स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा विवाद[२०७६ चैत, २०]
दूध पोख्नैपर्ने हो र ?[२०७६ चैत, २०]
डेटा सुरक्षामा प्रश्न[२०७६ चैत, २०]
लकडाउन पालना गरौं[२०७६ चैत, १४]